Thursday, 08 September 2011 17:45	नागरिक
सुक्रबार संवाददाता- नेपाली समाजमा अहिले तेस्रो लिंगीहरू आफ्ना हकअधिकारबारे दह्रो तरिकाले आवाज उठाउन थालेका छन्। उनीहरू राजनीतिलगायत सबै क्षेत्रमा सहभागी भएर आफूलाई स्थापित गर्ने क्रममा छन्।
Thursday, 08 September 2011 17:35	नागरिक
किशोर नेपाल- क्या बात, नेविसंघका प्रिय भाइहरू! यसलाई तपाईँहरूको दुर्भाग्य नै मान्नुपर्ला : नयाँ पत्रिकाको कार्यालयमा पसेर सोझै गुन्डागर्दी गरेको आरोपमा पक्राउ पर्नुभएका तपाईँहरूको सुन्दर तस्बिर पत्रपत्रिकामा देखेर लाजले टाउको निहुराउने नेविसंघका संस्थापकहरू अझै मरिसकेका छैनन्। लुखुरलुखुर सडकमा हिँड्दैछन्।
Saturday, 03 September 2011 15:04	नागरिक
मनोज घर्तीमगर- सुन्दरी प्रतियोगिताको बाढी चलेको छ देशमा। राजधानीमा मात्रै होइन, मोफसलमा पनि विभिन्न नामका ताजधारी सुन्दरीको हुल छ। ताज जितेपछि 'यो हुनेछ, त्यो हुनेछ, अवसरका नयाँ ढोका खुल्नेछन्, चर्चा कमाइनेछ' आदि/इत्यादि सपना देख्ने सुन्दरीहरू अहिले ताज ओल्टाइपल्टाई गरेर उपलब्धिका लेखाजोखा गर्दैछन्।
सौन्दर्य र बुद्धिको कम्बिनेसन इरा
Friday, 02 September 2011 15:21	नागरिक
किशोर नेपाल- नारायण वाग्लेले भनेका थिए, 'सारै सेक्सी छिन् इरा।' बुकवर्मको रिडमा उनको बिन्दास तस्बिर देखेपछि त्यस्तै लागेको थियो। इराको तस्बिरमा सेक्स अपिल देखेपछि शुक्रवारको मिडपेजका लागि उनकै फोटो सेसन गर्ने धुन चढ्यो। राजीव श्रेष्ठसँग कुरा गर्दा ऊ पनि उत्साहित देखियो।
पिएमसँग स्वप्न संवाद
Friday, 02 September 2011 15:05	नागरिक
किशोर नेपाल- डा. बाबुराम भट्टराई पिएम पदमा चुनिनुभएपछि पहिलोपल्ट बालुवाटार निवासमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको स्वागतका लागि कपालका रौं गुजुल्टिएजस्तै गुजुल्टिएका आशाको गुजुल्टो हातमा लिएर बधाई दिन पिएमको ढोकाअगाडि लाम लागेका फेसबुक पिढीको भिड बाक्लिइसकेको थियो।
Thursday, 25 August 2011 18:17	नागरिक
यी हराएकै हुन् त ?
Thursday, 25 August 2011 18:00	नागरिक
चन्द्रमणि शर्मा- वारि जमुना पारि जमुना जमुनाको फेदैमा मनकामना.... विभिन्न एफएम रेडियो, टेलिभिजनमा उनको यो गीत जति घन्कियो, त्यति सायदै अरू नेपाली गीत घन्किए। एफएममा मात्रै होइन, विभिन्न स्टेज कार्यक्रममा पनि यही गीतको दबदबा थियो कुनै बेला।